भावी पुस्तालाई च्यात्तिएको होइन, सग्लो नेपाल; अधुरो, अपुरो र अधकल्चो होइन सिङ्गो नेपाल - श्वेता खड्का - Complete Nepali News Portal
Samrat May 23, 2020
एकै स्वर र लयमा गाउन आग्रह गरिन श्वेता खड्काले, भाबुक बनायो यति धेरै माया आखा रसाए । हामीले लिम्पियाधुराको चिसो माटोमा सुन्तला फलाउन सक्छौ कि सक्दैनौ ? पार्वतीकुण्ड देखी गुन्जोसम्म कालोपत्रे सडकको निर्माण गरी हाम्रै सवारी साधन कुदाउन सक्छौकी सक्दैनौ ? कुटी, नाभी र छाङरुमा भेडाबाख्रा अनी चौरीहरु डुलाउन सक्छौ कि सक्दैनौ ? दशकौ देखी हाम्रो भुमिमा परेड खेलीरहेका छिमेकी सुरक्षकर्मीको दस्तालाई विस्तापित गरेर आफ्नै सुरक्षाकर्मिको क्याम्प खडा गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ ? अनी नेपाली शान र मानको प्रतिक राष्ट्रिय झण्डालाई लिपुलेकको चुचुरोमा फरफराउन सक्छौकी सक्दैनौ ?
हेर्नुहोस् असोज ३ गते शनिबारको राशिफल